Gịnị bụ kacha ewu ewu na obodo Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ kacha obodo na Spain
Morningtụtụ ọma ma na-ekpo ọkụ ụtụtụ! Kedu ka ị si ejizi oke ọkụ a na-enweghị ngwụcha? N'ikwu okwu banyere okpomọkụ dị elu, taa anyị ga-amata nke bụ kacha ewu ewu na obodo Spain, mba na-agbaze ọnwa otu ọnwa.
Ọ bụ eziokwu na Andalusia bụ obodo kwụụrụ onwe ya ebe mercury na-arị elu kasị elu? Chọpụta.
Iji mara nke kachasị mma obodo, ị ga-atụle ihe ndekọ site na afọ ndị gara aga na ndị kachasị ugbu a. Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị iburu n'uche ihe ndị ọzọ, dị ka iru mmiri dị ala ma ọ bụ ntụziaka na ọsọ nke ifufe. Yabụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata nke bụ pan na Spain, na-ele naanị ọnọdụ kachasị njọ kwa afọ, anyị nwere ike ikwu n'echeghị na ọ bụ Ecija (emi odude ke Andalusia) kacha ekpo ọkụ ugbu. Ma nke ahụ bụ kwa afọ ha gafere 37 exceed, na ọbụlagodi 40º…, 42º ma ọ bụ 45º afọ a na-agakarị. Kaosiladị, ndekọ ndekọ gọọmentị dịka AEMET Murcia debara aha ya na July 4, 1994 mgbe ha ruru 47'2º.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka oke nkezi okpomọkụ, ndekọ Córdoba nwere 36'7, Na-esochi ya Seville (35 º), Granada (8 º) ma ọ bụ Toledo (34 º).
Osimiri Es Trenc, Mallorca
Mgbe ị na-arụ ọrụ ụbọchị niile, abalị na-abịa… ị ga-ehi ụra? Na ebili ọkụ ọ nwere ike isiri gị ike ịrahụ ụra, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnọ na Almería ma ọ bụ Palma (Mallorca). Edere okpomọkụ kachasị elu na obodo abụọ a: 22'1º, na-esote Ibiza (21'8º) na Valencia (21'7º).
Ka ọ were, Kedu ụzọ dị mma karịa ịga maka igwu mmiri na ọdọ mmiri ma ọ bụ n'ụsọ osimiri na mmiri oyi tupu ị gaa ezumike? Cheta na ubochi obula nke gabigara bu otu ubochi rue oge mgbụsị akwụkwọ. Mụọ amụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Gịnị bụ kacha obodo na Spain
4 ngosipụta ihu igwe pụrụ iche nke okike
Otu okpomoku si emetuta umu anumanu